टी–२० सिरिजमा भारतको ‘क्लिनस्वीप’ – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
टी–२० सिरिजमा भारतको ‘क्लिनस्वीप’
India's KL Rahul playsareverse sweep shot during the second Twenty20 international cricket match between India and West Indies at Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium in Lucknow, India, Tuesday, Nov. 6, 2018. (AP Photo/Altaf Qadri)
By Digital Khabar Last updated Aug 7, 201940
भारतले वेस्ट इन्डिजविरुद्ध तीन खेलको टी–२० क्रिकेट सिरिज ‘क्लिनस्वीप’ गरेको छ । मंगलबार राति भएको तेस्रो खेलमा भारतलले वेस्ट इन्डिजलाई सात विकेटले हरायो । यससँगै भारतले सिरिज ३–० ले जितेको हो ।
एक सय ४७ रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको भारतले १९.१ ओभरमा तीन विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गरेको थियो । भारतको जितमा ऋषभ पन्तले ६५ रन बनाए । कप्तान विराट कोहलीले ५९ र ओपनर केएल राहुल २० रन बनाए । वेस्ट इन्डिजका ओशन थोमसले दुई विकेट लिए । फावियन एलनले एक विकेट लिए ।
यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिजले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर एक सय ४६ रन बनाएको थियो । वेस्ट इन्डिजका काइरन पोलार्डले सर्वाधिक ५८ रन बनाए । रोभमन पावेलले अविजित ३२ रन जोडे । निकोलस पुरनले १७ र कार्लोस वर्थवेट र ओपनर इभिस लुईसले समान १० रन बनाएका थिए ।
भारतका दिपक चहरले तीन तीन विकेट लिए । उनी प्लेयर अफ दी म्याच घोषित भए । नवदीप सैनीले दुई तथा राहुल चहरको एक विकेट झारेका थिए । यसअघि भारतले पहिलो खेलमा चार विकेट र दोस्रो खेल २२ रनले जितेको थियो । भारतले अब वेस्ट इन्डिजसँग तीन एकदिवसीय र दुई वटा टेस्ट खेल्दैछ । पहिलो एकदिवसीय बिहिबारबाट सुरु हुनेछ ।
तीन महिनाकी गर्भवती बुहारीको घाँटी थिचेर हत्या गरेको आरोपमा सासु र ससुरा पक्राउ
टोकियो ओलिम्पिक्स रुसी ह्याकरहरूको निशानामा परेको यूकेको भनाइ
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर प्रमुख थापाद्वारा तेक्वान्दो विजेतालाई बधाइ व्यत्त
स्पेनिस ला लिगामा बार्सा र रियल मड्रिड स्तव्ध